अनलाइनकारिताले सिकाएको पत्रकारिता ! « Janata Samachar
अनलाइनकारिताले सिकाएको पत्रकारिता !
प्रकाशित मिति : 11 January, 2019 5:36 pm
नेपालमा अहिले अनलाइन पोर्टल धेरै खुलेका छन् । निश्चित औँलामा गन्न सकिने बाहेकका अनलाइन आफ्नो व्यापार व्यावसायमा लिप्त छन् । व्यापार गर्नु नराम्रो होइन तर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर भिजिटर बढाउने वहानामा गरिएको पत्रकारिता कालान्तरमा जटिल बन्नेछ । कैयौँ अनलाइनको दिनचर्या यस्तै बनेको छ । मानिसलाई दुविधामा पारेर गरिएको पत्रकारिताले नयाँ पिढीलाई असर पारेको छ । अहिलेको युगमा मानिसलाई सूचना लिन गाह्रो छैन । तर सही सूचना लिन निकै गाह्रो बनेको छ ।
सबैका हात–हातमा भएका मोबाइल फोनहरुमा वाइफाई र डाटा झुण्डिएकै छन् । फुर्सद होस् या बेफुर्सदी इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा बिरलै भेटिन्छन् । अहिलेको युवा पुस्तालाई त इन्टरनेट लत बनेको छ । विभिन्न बाहानामा सबै मानिस फेसबुक, गुगल, इंस्टाग्राम, ट्वीटरमा जोडिएका छन् । सूचना लिन सजिलो बनेका छन् यी सञ्जाल । यिनै सञ्जालमा आएका सूचना नै गलत भएपछि पाठक र दर्शकलाई दुविधामा पार्ने गर्छ । अहिले अनलाइनका एडमिन लिनेको संख्या निकै बढेको छ । एकै जनासँग दुई, तीन एडमिन छन् । यसको उद्देश्य पत्रकारिता गर्ने या एडमिन बन्द भएपछि अरुलाई बेच्ने हो । भएका अनलाइन व्यवस्थित नभएकै बेला दिनप्रतिदिन च्याउ उम्रिए जस्तै खुलिरहेका अनलाइनले अहिलेको पिढीलाई अन्याय गरेको छ । गलत सूचनाको सिकार भएका छन् ।
घरमा बसेका गृहणीहरुले शेयर गर्छन्–‘यो पोष्ट शेयर गरेमा १० लाख तपाईंको खातामा आउने छ ।’ ‘देख्ने बित्तिकै लाइक गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ ।’ फेसबुकमा मात्रै लेखिने यी स्टाटस अहिले अनलाइन मार्फत् आउने गर्दछन् । ‘व्यापक शेयर गरौ, यहाँ यस्तो भाइरल भयो’ यावत् बिषयले सबैलाई दिक्क बनाएको छ । मनले मान्दैन एक क्लिक गर्नैपर्छ । अनलाइन सञ्चालकको एक भिओर बढ्यो, हेर्ने मानिसलाई हैरानी मात्रै । त्यहाँ उसलाई पढ्ने, जीवनमा काम लाग्ने कुनै सामाग्री भेटिदैन् । अहिले त शीर्षक एक, समाचार अनेक गर्ने प्रवृत्तिको हाबी भएको छ । आकर्षक हेडलाइन राखेर भित्र अर्कै प्रशंग राखेका धेरै समाचार भेट्न सकिन्छ ।
एक वर्षको अनुभवः
जनता समाचार डटकममा आवद्ध भएको एकवर्ष पुग्न लागेको छ । हाम्रो अनलाइन अहिले नेपालमा पढिने अनलाइनको १८ औँ नम्बरमा रहेको छ । यो अनलाइन १८ औँ नम्बरमा ल्याई पु¥याउन संस्थामा आवद्ध, जिल्लाका साथीहरु लगायत सबैको साथ र सहयोग रहेको छ । जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ भन्ने हेतुले खोलिएको जनता समाचार डटकमले हरेक बिषयलाई प्रगतीशील तवरले समेट्ने गर्दछ । हाम्रो अनलाइनमा प्रकाशित भएका हरेक सामाग्री भेरिफिकेसनमा आधारित छन् । कुनै समाचारको हामी पहिलो स्रोत नभएपनि दोस्रो स्रोत पक्कै बनेका छौँ । सकेसम्म हामी धेरै समाचारको पहिलो स्रोत नै छौँ ।
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडमा आवद्ध भएदेखि आफूले गर्ने पत्रकारिताको उचाइ बढेको छ । पत्रकारितामा गर्नुपर्ने बिषय समय–समयको तालिम र परामर्शले अझै सशक्त बन्दै गएका छन् । विगत ५ महिनायता जनता समाचार डटकमका सामाग्री धेरै परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनले गति लिएको छ । जनता समाचार डटकममा जनता रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न सकिने भएकालेपनि भिजिटरको संख्यामा केही राहत भएको छ । हामीले दिएका बिषयवस्तु पाठक र दर्शक मन पराएका छन् । अझै हामी बिषयलाई प्रधान ठान्दै लैजाने छौँ ।
हामी अरुभदा फरक
जनता समाचार डटकम अरु अनलाइन भन्दा पक्कै फरक छ । हामी गाउँदेखि केन्द्रसम्मका बिषयवस्तुलाई समाचारका माध्यमबाट प्राथकिमताका साथ प्रकाशन–प्रसारण गर्दछौँ । समाचार हाम्रा लागि साना हुँदैनन् । देशको ७७ औटै जिल्लामा छरिएर रहेका हाम्रा संवाददाताले पठाएका समाचारहरु जनता समाचार डटकममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित छन् । अबका दिनमा अनलाइनले अझै गति लिने कुरामा विश्वस्त छु । हाम्रो अनलाइनमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । प्रस्तुत गरिएका बिषय प्रगतीशील माध्यमबाट प्रकाशित छन् । जसले समाजलाई सही सूचना दिनेछ ।
बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता